Impisi ensundu (i-Hyena brunnea) ibizwa nangokuthi i-strandwolf - igama lesiBhunu elisho "imbuzi yelwandle" lapho ihunyushwa ngokuqondile ngesiNgisi - ngenxa yomkhuba wayo wokuhamba ngezintaba ekufuneni ukudla.
Ziyizinhlobo ezintathu ze-hyena ezinkulu kunazo zonke futhi zingahlukaniswa nezinye izinyamazane ngezinwele zazo ezide kakhulu, ezibomvu noma ezimnyama emzimbeni futhi zikhanya kakhulu emqaleni nasemaphethweni. Abantu abadala bakhula u-130 cm kuya ku-160 cm ubude, nabesilisa abanesisindo esingama-47 kg nabesifazane abangaba ngu-42 kg ngokwesilinganiso.
Ama-hyena forelegs aseBrown aphethwe emigqeni ephakeme futhi eningi kakhulu kunemilenze yabo eyakhiwe ngokucophelela, okwenza ukuba amahlombe abo aphakeme kunamafuphi abo. Amakhanda abo amancane nezinwele ezincane kunazo zonke ezinye zomzimba wazo futhi sezilokhu zikhomba izindlebe.
I-hyena ebomvu ivame ukuhlala emindenini enabantu abane-20, kepha abanye abesilisa nabesifazane bangashintsha emadodeni abodwa. Amantombazane abe ngumlingani one-alpha ethandwa kakhulu, noma abesilisa abesilisa abahlala emndenini. Abesilisa abesilisa abavamile bavame ukuthola abesifazane abathandana nabo ngokocansi ngokuzwa iphunga, besebenzisa izikhala zomhlaba ezihlabayo kanye nemikhumbi yesikhungo esenziwe yilabo.
I-hyena ebomvu ikhulile ngokocansi kusukela eminyakeni emibili nengxenye yobudala. Isikhathi sokuvuthwa sivame ukusukela ngoMeyi kuya ku-Agasti, kuye ngokutholakala kokudla. Amantombazane abeletha emadodeni angasese bese athuthela abantwabakho kuwo wonke umndeni amasonto ambalwa ngemva kokuzalwa.
I-pups eyodwa kuya kwemihlanu izalwa emva kwesikhathi sokubeletha kwezinsuku ezingu-100. Bazophuza kusukela kumama kuze kube nezinyanga eziyishumi nane.
Isibonelo Impisi enzinsundu aphethwe ngokuyinhloko, edla izilwane ezihlukahlukene ezincane, izinambuzane nezithelo. Ngokuvamile bayodla bodwa, kodwa izilwane eziningana ngisho nasezindlini ezahlukene zingase zibuthe ukuze zidle isidumbu esikhulu. Basebenza kakhulu ebusuku, kodwa basebenze ngokwengeziwe ngosuku, lapho ukudla kuntula khona. Bangabantu abazingeli abampofu, ngakho-ke ama-prey aphilayo enza ingxenye encane kakhulu yokudla kwabo. Kodwa-ke, ngabanye ngezinye izikhathi bangase babe ama-stock thieves.
Abalimi kumele bakhumbule ukuthi ukubona isidlo se-hyena esibomvu esidumbu akusho ukuthi babulale isilwane. Ngokomqulu we-Predation Management Manual, isisulu sibanjwe ngemuva, sidilizwe bese sibulawa ngokuchoboza ikhanda ngezinsizwa zabo ezinamandla, ukuluma ngemuva kwekhanda elibhoboza futhi livule ubuchopho noma lilume eceleni intamo, nezinyo elilodwa eduze kweso lesilwane kanye nelinye ephansi komphimbo. Izilwane ezincane zizoqothulwa ngokuphelele, kuyilapho kuphela ingxenye yezinyosi zingase zishiywe uma isisulu sikhulu. I-skull noma amathambo amakhulu alo mhlanzi kungenzeka ukuthi achotshoziwe. Amathumbu akavami ukudliwa.
"Ukubheka" ama-hyen ezinsundu angase abe nama-spin off, ngoba ukuncintisana nezinye izilwane ezincane ezifana ne-jackal zingasiza ekunciphiseni ukulahlekelwa kwemfuyo. Emapulazini okuzingela, nawo adlala indima ebalulekile ekuvimbeleni ukusakazeka kwezifo ngokuhlanza i-carrion. Imvume iyadingeka ukuze ibambe futhi ikhulule i-hyena ensundu, ngoba iyinhlangano yomndeni we-hyena, evezwe njengosongelwa yi-International Union of Conservation of Nature.
Ngokomqulu we-Predation Management Manual, ingozi yempuphu ephethe i-lamb carcass njenge-bait isetshenziswe ngempumelelo ethile. Ukuvimba ucingo kungenye yezindlela ezingcono kakhulu zokugcina i-hyena ebonakalayo ngaphandle kwemfuyo, ngenkathi i-kraaling, abelusi kanye nezilwane eziqaphayo zingasetshenziswa ukuvikela izilwane ngaphambi kokudalwa ama-hyen ezinsundu.